Ra’isulwasaare ku xigeenka Soomaaliya oo ka qayb galay kulan looga hadlayay ka hortago xagjirnimada. – The Voice of Northeastern Kenya
Star FM March 22, 2019
Ra’iisul Wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed (Khadar) ayaa magaalada Brussels ee xarunta dalka Belgium kaga qayb galay shir looga hadlayo ka hor-tagga iyo la dagaallanka rabshadaha salka ku haya falalka Xag-jirnimada.
Shirkaan oo shalay furmay qorshuhuna yahay inuu soo xirmo maanta oo Jimce ah ayaa si gaar ah looga hadlayaa sidii casharro looga baran lahaa hababka guulaystay ee dalalka Afrika ay u adeegsadeen ka hor-tagga iyo la dagaallanka Xag-jirnimada, si loo wadaago hannaanka ugu habboon, loogana faa’iidaysto talooyinka khuburada ku xeel dheer arimahaasi.
Ra’isulwasaare ku xigeenka Soomaaliya ayaa sheegay inay muhiimad weyn leedahay inuu machadka nabadda ee Yurub, ka jeediyo khudbada uu kaga hadlayo ka hor-tagga iyo la dagaallanka rabshadaha Xag-jirnimada ku salaysan,isgoo sheegay in nooc kasta oo Xag-jirnimo ah uu aduunka dhibaato ku hayo.
Wuxuu Tilmaamay inay waajib tahay in si wada jir ah loola dagaalamo iyadoo laga run-sheegayo, fursadaha la haysto iyo wada shaqaynta xooggan ee dhinacyada kala duwan, Maadaama la joogo xilli ay jiraan caqabado dhanka amniga ah.
← Baaq Loo Diray Xildhibanada Golaha Shacabka Ee Ku Maqan Safarada Dibadda
In ka badan 57 milyan oo loo aruuriyay madarasada Al-Fataax ee Wajeer →